Allgedo.com » Deg Deg: Qarax xooggan oo goordhow gil-gilay Magaaladda Kismaayo
Home » News » Deg Deg: Qarax xooggan oo goordhow gil-gilay Magaaladda Kismaayo Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Qarax xoogan ayaa goordhow laga maqlay magaaladda Kismayo ee gobolka Jubada Hoose.
Qaraxan ayaa lasoo sheegayaa inuu ahaa bambo nooca dhulka lagu aaso ah oo lala beegsaday ciidamada dowlada ee kusugan kaniisadii hore ee Talyaaniga .
Ku dhawaad 2 askari ayaa lasoo sheegayaa in ay geeriyoodeen kuwa kalana ay dhaawacmeen.
Dad kusugan Kismaayo ayaa soo sheegaya in xaaladu ay tahay mid aad ucakiran, waxaana soconaya howlgaloo balaaaran.
Waxaa jira warar sheegaya in qaraxa uu ahaa mid horey loogu sii aasay Magaaladda.
Wararkii soo kordha kala soco AOL insha Allah